प्यान अनिवार्य : कत्तिको व्यावहारिक छ ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्यान अनिवार्य : कत्तिको व्यावहारिक छ ?
२०७६ श्रावण २०, सोमबार ०७:५९ गते
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा नै सरकारले ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’को नीति लिएको थियो । हरेक निजी फर्म, संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तलब लिनका लागि प्यान कार्डको व्यवस्था गरिएको छ, तर अनिवार्य होइन । यसबाट राज्यको प्रणालीमा आबद्ध भएको पहिचान पनि दिने र नागरिकलाई आफूले प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति पनि यो कार्ड लिएपछि हुन्छ ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब आइन्दा कुनै पनि कर्मचारीले एक हजारभन्दा धेरै रकम तलबको रुपमा लिनका लागि बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि प्यान नम्बरबिना कर्मचारीलाई तलब दिएको छ भने त्यस्ता कम्पनीले खर्चका रुपमा देखाउन पाउने छैनन् । कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब बैंक खातामार्फत दिनुपर्ने भएकाले प्यान अनिवार्य हुनेछ ।
२०७६ साल जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक–२०७६ मा आयकर ऐन–२०५८ लाई संशोधन गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर नलिएका जोसुकैले लिने तलबभत्ता तथा ज्याला खर्चलाई खर्च अमान्य हुनेछ भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षहरुमा पनि कर्मचारी तथा कामदारहरुले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवसायको खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने व्यवहारमा प्रयोग भएको थिएन । तर, २०७६ साउनदेखि कुनै पनि काम, सेवा गरी तलबभत्ता, ज्याला लिने सम्पूर्णले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ । हाल काम गरिरहेका तथा नयाँ नियुक्ति लिन जानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रतिलिपि पेश गरेपछि मात्र काम गर्न योग्य मानिनेछ, अर्थात् निजलाई दिइएको तलबभत्ता, ज्यालालाई खर्चका रुपमा मान्य गरिने कुरा आर्थिक विधेयक–२०७६ मा उल्लेख छ ।
सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी तथा प्रचलित कानुनबमोजिमका पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्रािष्ट्रय गैरसरकारी संस्था, बैक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, एकलौटी तथा साझेदारी फर्म एवं विद्यालय तथा विश्वविद्यायलमा कार्यरत सबैले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि मात्र तलबभत्ता, ज्याला, खान योग्य हुने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । स्थायी लेखा नम्बर नभएको एक हजार रूपैयाँभन्दा माथिको मूल्यको बीजकबापत्को खर्च कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । करयोग्य आम्दानी भएका सबैले अनिवार्यरुपमा प्यान लिनुपर्छ । प्यान लिन अनिवार्य नभएका अन्य व्यक्तिले पनि प्यान लिन सक्ने व्यवस्था छ । आफूले गर्ने कारोबार, बिलबिजक, खाताबही, आय विवरणलगायत बैंकिङ कागजात तथा करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यान अनिवार्य हुन्छ ।
व्यक्ति र कम्पनीले फरक–फरक प्यान लिनुपर्छ । राजस्व दाखिला गर्ने समयमा प्यान नम्बर राखियो भने राजस्वको अभिलेख पनि पारदर्शी हुनेछ । अहिले रोजगारीको आय हुने व्यक्तिका लागि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्यान नम्बर वितरणको काम भने आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाटै सुरू भएको हो । त्यसकारण, नेपालमा यो नयाँ प्रावधान भने होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने पाँच लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई मात्रै प्यान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान प्रत्येक करदाताको पहिचानका लागि दिइने स्थायी संकेत अंक हो । रोजगारी वा लगानीबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले प्यान लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्यान प्रत्येक व्यक्ति र करदातालाई कर प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइने एक पहिचान हो । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा पनि स्थायी लेखा नम्बर ९ अंकको हुन्छ र हरेक व्यक्तिको स्थायी लेखा नम्बर फरक–फरक हुन्छ, एकअर्कासँग मेल खाँदैन । यो एकपटक मात्र प्रदान गरिन्छ र सधैँभरि सोही संकेत अंक कायम रहिरहन्छ । प्यान कार्ड भनेको करदाताको एक प्रकारको परिचयपत्र हो । यो सानो आकारको हुन्छ र गोजीमा राखेर मज्जाले हिँड्न सकिन्छ । यो सरकारले जारी गरेको परिचयपत्र भएकाले नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र नभएको अवस्थामा यसलाई आफ्नो परिचय दिने काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कार्यालयमा वा निर्माण कम्पनीमा काम तथा सेवा गर्ने व्यक्तिले पाउने तलबभत्ता, ज्याला, पारिश्रमिक दिँदा सम्बन्धित व्यवसायले नै नियमानुसार अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी दिने हुँदा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर व्यक्तिले वार्षिकरुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण बुझाउन पर्दैन । तर, एक जना व्यक्तिले दुई वा सोभन्दा बढी स्थानमा काम गर्ने र सोबापत् प्राप्त हुने वार्षिक कुल आम्दानी पारिवारिकरुपमा ४ लाख ५० हजार र एकलरुपमा ४ लाखभन्दा बढी हुन्छ भने सो व्यक्तिले आयकर ऐनको कर लाग्ने मापदण्डअनुसार सो रकमको १ प्रतिशत, थप १ लाखमा १० प्रतिशत, थप २ लाखमा २० प्रतिशत तथा २० लाखसम्मको अन्तरको ३० प्रतिशतका दरले आयकर राजस्व खातामा रकम ऐनले तोकेको समयभित्र दाखिला गर्नुपर्छ । सबैलाई आयकरको दायराभित्र ल्याउन सकेसम्म राजस्व संकलनलाई वृद्धि गर्न सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
जोकोही व्यक्तिको स्थायी लेखा नम्बरबाट निजको वार्षिक आम्दानी र राजस्व दाखिला गरेको प्रस्ट देखिने हुन्छ । प्यान कार्ड लिएपछि झन् असुरक्षित हुने होइन, झन् सुरक्षा र परिचय मिल्छ । त्यसैले, प्यान लिन्नँ भन्नु लगानीकर्ताले आफ्नै हित र सुरक्षाविरोधी कुरा गर्नु हो, आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । व्यक्तिगत करदाता नम्बर भनेको आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर कार्यालयहरुले दिने विशेष पहिचान नम्बर हो ।
एउटा व्यक्तिका लागि जीवनमा एउटामात्रै व्यक्तिगत करदाता नम्बर दिइने गरिन्छ । त्यो व्यक्तिले फर्म वा कम्पनी स्थापना गरेमा फर्म वा कम्पनीको नाममा करदाता नम्बर लिनुपर्छ, यो अलग पाटो हो । प्यान कार्ड लिँदा सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्छ, त्यसैले लगानीकर्ताको खर्च बढ्छ भन्ने हल्ला पनि चलाइएको पाइएको छ । यो पूरै गलत हो, प्यान कार्ड बनाउन कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । प्यान कार्ड बनाउँदा यसको रेकर्ड स्वचालित प्रणालीसहितको कम्प्युटरमा रहने र इन्टरनेटमार्फत हेर्न र संशोधन गर्न सकिने हुँदा न त लगानकर्ताले भारी बोक्नुपर्छ, न त कर कार्यालय का कर्मचारीले नै । प्यानमा आफूले तिरेको करको सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने भएकाले निकै उपयोगी हुन्छ । उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार, कागजात तथा आय विवरणलगायत करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्यानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ
कुनै व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदली गरे पनि करदाताको संकेत नम्बर भने स्थायी हुन्छ । यो कर तिर्ने प्रयोजनमा काम लाग्छ । यसबाहेक, कुनै पनि आधिकारिक निकायलाई कर प्रयोजनका लागि आवश्यक परेका सूचनासमेत यहाँ भण्डार गरिएको हुन्छ । भ्याटको समेत कारोबार गर्ने व्यक्तिले छुट्टै प्यान लिनुपर्दैन । भ्याट तिर्नुपर्ने व्यक्तिले एउटै प्यान नम्बरबाट आयकर र भ्याटको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
धेरै लगानीकर्तालाई अहिले भ्रममा पार्न खोजिएको छ कि प्यान लिएपछि सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ, सरकारले कर असुल्छ, त्यसैले घाटा हुन्छ । यो कुरा सही होइन । कहीँ जागिर वा आंशिक काम, कल्सल्टिङ वा ठेक्का गर्नेको भने त्यसबाट प्राप्त भएको आयमा कर कट्टी भएको विवरण पनि प्यान नम्बरमै सुरक्षित हुन्छ । रगत–पसिना बगाएर कमाएको धनलाई कुनै सरकारी अधिकारीले कालो धन भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाउन पनि सक्दैन ।
सबै कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जान हिच्किचाइरहेका छन् । न्यूनतम तलब दिइरहेका छैनन् । सरकारी सिस्टमभित्र बैंक खाता र प्यानमार्फत यसको नियमन हुने हो भने मजदुरका समस्या न्यूनीकरण हुन्छन् । त्यसकारण, अनिवार्य प्यान होस् वा अन्य सिस्टममा मजदुरलाई बहाना बनाएर साहूहरु उम्कने वातावरण बन्नुहुँदैन । किनकि, साना–साना खुद्रा पसल चलाउनेदेखि ठूला–ठूला कम्पनी चलाउने जसमा एक–दुई जना कामदारदेखि सयौँको संख्यामा कर्मचारी राख्ने कम्पनीहरु पनि छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुले यसभन्दा अगाडि पनि हरेक कर्मचारीको तलबबाट आयकर सरकारलाई तिर्दै आएका थिए । त्यसरी आयकर तिर्दा कर्मचारीलाई तलब दिँदा नै कर कट्टा गरेर दिने र एकमुष्ट कर कम्पनी वा फर्मको नाममा सरकारलाई बुझाउने गरिँदै आएको थियो । यसो गर्दा कम्पनीलाई करदाताका रुपमा पुग्ने फाइदा लिन सजिलो हुन्थ्यो र कर्मचारी संख्या पनि निश्चितरुपमा कर कार्यालयलाई जानकारी गराउनु बाध्यकारी थिएन । कर्मचारीको तर्फबाट हेर्दा भने करचाहिँ तलबबाट तिरेको छ, राज्यको करदाता सूचीमा भने नाम आउँदैन । यसो गर्दा कर तिर्ने व्यक्ति कर तिरेको आधारमा पाउने विभिन्न सुविधाहरुबाट वञ्चित हुनसक्छ । उता, रोजगारदाताले भने अर्काको पैसा पनि आफ्नो नामबाट करका रुपमा तिर्दा फाइदा हुने गर्दछ ।
निजी फर्महरुले हरेक वर्ष फर्म नवीकरण गर्नुअघि अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अडिट गर्दा आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शीरुपमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता फर्महरुले राज्यलाई खुद आम्दानीबाट नभई खुद नाफाबाट मात्र आयकर तिर्दछ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरुले नक्कली कामदार खडा गरी तलबका रुपमा खर्च भएको देखाउने र सो रकम खुद नाफाबाट घटाई आयकर छली गर्ने गर्दछन् । यसो गर्दा खुद नाफाको रकम घट्न जान्छ र राज्यलाई तिर्ने करको साथै राज्यले व्यवस्था गरेबमोजिम कर्मचारीलाई दिनुपर्ने नाफाको १० प्रतिशत बोनससमेत कम पर्न जान्छ । यसो गर्दा अर्बौंको कारोबार गर्ने र करोडौँको नाफा कमाउने कम्पनीले नाफाको रुपमा केही लाख देखाएर राज्य र श्रमिकमाथि शोषण गर्दै आएका छन् । यसरी कम्पनी सञ्चालक सधैँ मोटाउने र कर्मचारी तथा राज्य भने दुब्लाउँदै जाने जुन प्रक्रिया थियो अबको अनिवार्य प्यानको नीतिले त्यस्तो कार्य गर्न रोक्दछ । त्यसैले, गर्दा कम्पनी र निजी फर्म सञ्चालकहरुले यसको विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले केही वर्षअगाडि नै श्रमिकको न्यूनतम तलब तोकेको थियो । तर, त्यस नियमको कुनै कुनै कम्पनीबाहेक अधिकांश रोजगारदाताले पालना गरेका छैनन् र ठूलो मात्रामा श्रम शोषण हुँदै आएको छ । अस्पतालहरुमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नर्सदेखि सामान्य खुद्रा पसलमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकसम्मलाई तोकिएभन्दा निकै कम ज्यालादरमा काम लगाउँदै आएका छन् । यसभन्दा अगाडि कसलाई कति तलब दिइयो र निजी फर्ममा जम्मा कति कर्मचारी छन् भन्नेसम्मको अनुगमन हुन सकेको थिएन । राज्यको कर्तव्य ज्यालादर तोकेर मात्र पूरा हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयनसमेत गराउन सक्नुपर्दछ । यसरी विगतदेखि न्यून ज्यालामा श्रमिकलाई काम लगाएर श्रम शोषण गर्दै आएका मालिकहरुलाई अनिवार्य बैंक खातामार्फत रकम दिँदा र अनिवार्य प्यानमा कर्मचारी दर्ता हुँदा लुट्दै आएको ठूलो रकम श्रमिकलाई दिनुपर्ने भएकोले झन् धेरै विरोध हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो भ्रष्टाचारको कारणले सम्पूर्ण सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरु घाटामा गएको अवस्थामा दिन दुगुना रात चौगुणा बढेका निजी व्यवसायीका सेता धन र अदृश्य काला धनका धेरैजसो स्रोत यी र यस्तै आलोकाँचो र कमजोर नीति नै हुन्, जसलाई केही व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुप चलाउँदै आएका थिए । विभिन्न कारणले निजी फर्म मालिकहरुले अनिवार्य प्यान कार्डको व्यवस्थाविरूद्ध धाबा बोल्नुलाई खासै अचम्म मान्नुपर्दैन । तर, आफैँले घरबाट वा साइबरबाट सहजरुपमा दर्ता गर्न सकिने प्यानलाई झन्झटका रुपमा लिएर समग्र श्रमिक वर्ग र देशको हित हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै श्रमिक वर्गबाट नै यो व्यवस्थाको विरोध हुनु भनेको चाहिँ प्रविधिमोही शिक्षित वर्गको मूर्खता हो, जुन वर्ग अहिलेको सूचना प्रविधिमा बलियोसँग जोडिएका छन् । राज्य पछि नह्टी कुनै पनि हालतमा यो नियम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले, अहिलेको स्थिर सरकारले लिएको यी र यस्तै जनपक्षीय नीतिलाई मूल्याङ्कन गरी साथ र समर्थन दिनु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पनि हुन आउँछ । त्यसैले, हरेक निजी फर्म तथा संघसंस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्यान कार्ड दर्ता गरेर समग्र श्रमिक वर्ग र राज्यलाई हित हुने काममा सहयोग गर्न जरूरी छ ।
सरकारले जुन नियतले प्यान कार्ड तथा सबै मजदुरको १ हजार रूपैयाँभन्दामाथिको भुक्तानी बैंक खातामार्फत गर्ने नीति लिएको छ, यो नीति निकै राम्रो हो । तर, सबै कुरा तत्काल लागू नहुन सक्छन् । हामीले नीति ल्याउने क्रममा त्यसको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक पाटोलाई उत्तिकै मह¤व दिनुपर्छ । प्यान, बैंक खाता वा सबै व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुने विषयसँग मजदुरलाई कुनै समस्या छैन । किनकि, सरकारले चाह्यो भने सबै मजदुरलाई सहजै प्यान कार्ड उपलब्ध गराउन सक्छ । बैंक खाता खोल्ने अभियान चलाएर शून्य व्यालेन्समा बैंक खाता खोल्न सक्छ । तर, मजदुरलाई गाह्रो हुन्छ भन्दै व्यवसायीहरु उम्कने र उनीहरुसँग सम्झौता गरी राज्य आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने जुन परिपाटी छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।